IRiad Ayour-iRiad entsha eseTamraght
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguJanina
UJanina ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-Riad Ayour ikwilali ezolileyo ye-berber kwi-14km ukusuka e-Agadir kwaye kuphela iikhilomitha ezi-5 ukusuka kwidolophu edumileyo yaseTaghazout. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokungqiyama ukonwabela iilwandle ezingenanto ngeenxa zonke. I-Riad yi-brandnew kwaye yakhiwe ngamaphupha nothando sisibini esasisebenzisa i-surfer. Yeyokuqala eco Riad eMorocco kwaye ikona nganye yakhiwa ngamagcisa amangalisayo aseMorocco. I-Riad Ayour yindawo ekhethekileyo enedama lokuqubha embindini. Ithatha igumbi leendwendwe ezili-10 ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala kunye nombono omangalisayo
Iinjongo zethu zikaRiad Ayour yayikukukwakhela ikhaya kude nekhaya kwaye sikholelwe ukuba iphupha lethu libe yinyani. Sine-terraces ezi-3 ezahlukeneyo, ithala leencwadi elikhulu elineencwadi ezimangalisayo, ibha yeti ene-organic fresh tea kunye ne-terrace yethu ephezulu unokufumana ukutshona kwelanga okumangalisayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Janina
Sihlala eRiad kwaye sikhona naziphi na iimfuno.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Agadir